I-Folk Studio e-Regina Apartments - I-Airbnb
I-Folk Studio e-Regina Apartments
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Nikos
I-Regina Apartments iyinkimbinkimbi yezitudiyo ezivulekile kanye namafulethi okubuka angapheli. Itholakala esigodini esisogwini sase-Alikanas engxenyeni esenyakatho-mpumalanga yesiqhingi sase-Zakynthos, sinikeza uhambo olunokuthula lwamaholide.
Umndeni ophethe ibhizinisi eligcina isiko nezakhiwo ze-Zakynthian!
Abanikazi bahlala beseduze nganoma yini ongase uyidinge!
Indawo yokubaleka yamaGreki ehlangana kahle nemvelo yemvelo, enikeza izici eziningi ezivelele:
Wonke amafulethi anenzuzo yokubuka ukushona kwelanga okuvelele kanye namasimu aluhlaza angapheli, anakekelwa ngothando oluvela kubalimi abangamaGreki.
I-Alikanas sandy beach iwuhambo olu-5 'usuka ekamelweni lakho.
Kumahhala ukusebenzisa ichibi elihlanganyelwe eliphambene nezindawo zethu.
Impahla ihlanganisa izingadi ezibanzi ezinezindawo eziningi zokuhlala ukuze ujabulele sonke isikhathi se-ionian samaholide akho.
Indawo enokuthula, kodwa ukuhambahamba nje okufushane ukusuka esikhungweni se-Alikanas, lapho uthola khona izimakethe zasendaweni, izindawo zokudlela, amabha njll.
Indawo yokupaka yangasese mahhala.
Wonke amafulethi ethu ahlome nge-air conditioning yawo.
Ungathola ikhishi elinazo zonke izinto eziyisisekelo ezidingekayo ngamaholide akho.
Wonke amafulethi ethu nezitudiyo zifakwe umbhede ophindwe kabili osayizi wendlovukazi kanye nombhede osofa ababili.
(Ukusingatha 2-5 ngokushelela)
Izinsiza zihlanzwa njalo ezinsukwini ezimbalwa, namashidi namathawula ayavuselelwa.
I-WiFi, i-Flat TV, i-balcony enefenisha
Ukudluliswa kusuka futhi kuya esikhumulweni sezindiza kungahlelwa uma kudingeka.
I-Alikanas ibekwe uhambo olufushane ukusuka esikhumulweni sezindiza i-Zakynthos futhi iyindawo ekahle yokubaleka kuzolile e-Ionian Islands. Ibhishi i-Alikanas iwulwandle oluphephile, olungajulile lwe-Blue Flag, ibangana nje elifushane phansi komgwaqo ukusuka endaweni yethu. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukuhamba ogwini uvakashela amabhishi afihliwe nama-cove, ujabulele ukudla okumnandi kwasolwandle newayini laseZakynthos noma noma ufuna ukuzama imigoqo yasendaweni ezungeze isiqhingi, i-Alikanas iyisisekelo esihle sokuhlola isiqhingi esihle saseZakynthos. !
Inombolo yepholisi: 1029604